အများအမြင်မှာ မလှပေမယ့် သူ့အတွက်တော့ အရမ်းပြီးပြည့်စုံပြီး တာဝန်ကျေလို့ ချစ်ဇနီးလေးကို ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ချစ်စု - TGI Daily News
ပရိသတ်ကြီးရေ ဟာသလူရွှင်တော်ချစ်စုကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စုက ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အနုပညာ‌အမွေကို ဆက်ခံပြီး အငြိမ့်ပွဲတွေမှာလည်း အကောင်းဆုံး‌ဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စုက ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မိဘတွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုဆိုရင်တော့ ချစ်စုက သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးလေးအကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်းရေးသားမျှဝေလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်စုက”လောကကြီးကပျက်ရယ်ပြုတိုင်း အဲ့ဒီမိန်းမကဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအမက ဘယ်လိုလို့ပြောနေကြတိုင်း ကျွန်တော်ပြုံးနေမိတယ်…ကျွန်တော့်အတွက်တော့သူဟာ သံသရာအတွက် ပါရမီဖြည့်ဖက်ကောင်းပါပဲ….မိန်းကလေးတိုင်းဟာလှချင်တယ် ကျွန်တော်ဟာသဘာဝကိုပိုချစ်တယ် မိတ်ကပ်မပါလည်း သနပ်ခါးမပါလည်း ကျွန်တော့်အတွက် သဘာဝဆန်ဆန်နေပေးတက်တယ်…
သူ…..ဘယ်ဟာတွေဘယ်လိုကောင်းတယ် ဘယ်အဝတ်အစား ဘယ်အလှပြင်မိတ်ကပ် ဘယ်ပစ္စည်းရယ်လို့ မပူဆာဘူး စဉ်းစားလိုက်တိုင်းကျွန်တော့်အတွက်ချည်းပဲ သူအဆင်ပြေသလိုနေပေးတယ်…. အဲ့ဒါသူပဲ….ကျွန်တော်နဲ့ သမီးအတွက်က လွဲရင် သူက ငါးပိရည် အရွက်ကြော်နဲ့စားတတ်တယ် အဲ့ဒါသူပဲ….မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်ကတည်းက ညအိပ်ချိန်ထိ အိမ်မှုကိစ္စအရာရာအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိအောင်လုပ်ကိုင်ပေးတက်တယ် အဲ့ဒါသူ……
သူ့မိဘ အတွက် ကိုယ့်မိဘအတွက်ကို ရင်ဘက်ကြီးထဲထည့်ပြီး အချိန်ပြည့် ငြိုငြင်မှုမရှိစဉ်းစားပေးတတ်တာလည်း သူပါပဲ…..ကိုယ့်အလုပ်ကို ပင်ပန်းမှာစိုးလို့မလုပ်တတ်လုပ်တတ်အချိန်ကစပြီး ကြိုးစားဝိုင်းလုပ်ကိုင်ပေးတယ် အစစအရာရာ သူဦးဆောင်နိုင်တဲ့အထိ ကြိုးစားပေးခဲ့တယ် အဲ့ဒါသူပဲ…..ကုန်ကုန်ပြောရရင် အဓိဌာန်ခရီးတွေ အလှူအတန်းတွေ ယောဂီဝတ်ပြီး ဘုရားပေါင်းစုံ အဓိဌာန်တက်ခဲ့ချိန် အရူးတွေလို့အပြောခံနိုင်တာလည်းသူပဲ….ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကိုယ်ဆုပန်ချိန် အနောက်ကနေပါရမီဖြည့်ပါ့မယ်လို့ ရဲရဲတောက်သစ္စာပြုရဲသူကလည်း သူပါပဲ….
ဟုတ်တယ် သူ့မှာ မိတ်ကပ်မရှိဘူး ဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူး ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲမလုပ်တတ်ဘူး အများအမြင်မှာ လှမနေဘူး အသားမဲချင်မဲမယ် မျက်ကွင်းတွေညိုမယ်ကျမယ် သူ့မှာအဆင်းမလှခဲ့ဘူး ဒါကျွန်နော့်အတွက်အရေးမှမကြီးတာ…သူ့လို တာဝန်ကျေနိုင်မယ့် သူ့လိုပေးဆပ်နိုင်မယ့် သူ့လိုပါရမီဖြည့်နိုင်မယ့် အမျိူးသမီး ကျွန်တော့်အတွက်တော့ လောကမှာမရှိသေးဘူး….ခင်ဗျာတို့သူ့ကိုဘယ်လောက်ဆဲဆဲ ဘယ်လိုပြောပြော ဘယ်လိုဝေဖန်ဝေဖန်…ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ သူဟာ ….ပါရမီဖြည့်ဖက်…..သူပါပဲ…..”ဆိုပြီး ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Source and Photo Credit:မောင်ချစ်စု And Art Of life
ပရိသတျကွီးရေ ဟာသလူရှငျတျောခဈြစုကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျလုပျဆောငျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ခဈြစုက ဖခငျဖွဈသူရဲ့ အနုပညာ‌အမှကေို ဆကျခံပွီး အငွိမျ့ပှဲတှမှောလညျး အကောငျးဆုံး‌ဖြျောဖွတောဖွဈပါတယျ။ခဈြစုက ပြျောရှငျအေးခမျြးတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး မိဘတှကေိုလညျး ဂရုစိုကျပေးနတောဖွဈပါတယျနျော။အခုဆိုရငျတော့ ခဈြစုက သူ့ရဲ့ခဈြဇနီးလေးအကွောငျးကို အောကျပါအတိုငျးရေးသားမြှဝလောတာဖွဈပါတယျ။
ခဈြစုက”လောကကွီးကပကျြရယျပွုတိုငျး အဲ့ဒီမိနျးမကဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျ အဲ့ဒီအမက ဘယျလိုလို့ပွောနကွေတိုငျး ကြှနျတျောပွုံးနမေိတယျ…ကြှနျတျော့အတှကျတော့သူဟာ သံသရာအတှကျ ပါရမီဖွညျ့ဖကျကောငျးပါပဲ….မိနျးကလေးတိုငျးဟာလှခငျြတယျ ကြှနျတျောဟာသဘာဝကိုပိုခဈြတယျ မိတျကပျမပါလညျး သနပျခါးမပါလညျး ကြှနျတျော့အတှကျ သဘာဝဆနျဆနျနပေေးတကျတယျ… သူ…..ဘယျဟာတှဘေယျလိုကောငျးတယျ ဘယျအဝတျအစား ဘယျအလှပွငျမိတျကပျ ဘယျပစ်စညျးရယျလို့ မပူဆာဘူး စဥျးစားလိုကျတိုငျးကြှနျတျော့အတှကျခညျြးပဲ သူအဆငျပွသေလိုနပေေးတယျ…. အဲ့ဒါသူပဲ….ကြှနျတျောနဲ့ သမီးအတှကျက လှဲရငျ သူက ငါးပိရညျ အရှကျကွျောနဲ့စားတတျတယျ အဲ့ဒါသူပဲ….မကျြစိနှဈလုံးဖှငျ့ကတညျးက ညအိပျခြိနျထိ အိမျမှုကိစ်စအရာရာအားလုံး ခွှငျးခကျြမရှိအောငျလုပျကိုငျပေးတကျတယျ အဲ့ဒါသူ……
သူ့မိဘ အတှကျ ကိုယျ့မိဘအတှကျကို ရငျဘကျကွီးထဲထညျ့ပွီး အခြိနျပွညျ့ ငွိုငွငျမှုမရှိစဥျးစားပေးတတျတာလညျး သူပါပဲ…..ကိုယျ့အလုပျကို ပငျပနျးမှာစိုးလို့မလုပျတတျလုပျတတျအခြိနျကစပွီး ကွိုးစားဝိုငျးလုပျကိုငျပေးတယျ အစစအရာရာ သူဦးဆောငျနိုငျတဲ့အထိ ကွိုးစားပေးခဲ့တယျ အဲ့ဒါသူပဲ…..ကုနျကုနျပွောရရငျ အဓိဌာနျခရီးတှေ အလှူအတနျးတှေ ယောဂီဝတျပွီး ဘုရားပေါငျးစုံ အဓိဌာနျတကျခဲ့ခြိနျ အရူးတှလေို့အပွောခံနိုငျတာလညျးသူပဲ….ကုနျကုနျပွောရရငျ ကိုယျဆုပနျခြိနျ အနောကျကနပေါရမီဖွညျ့ပါ့မယျလို့ ရဲရဲတောကျသစ်စာပွုရဲသူကလညျး သူပါပဲ….ဟုတျတယျ သူ့မှာ မိတျကပျမရှိဘူး ဟနျဆောငျမှုမရှိဘူး ပတျခြှဲနှပျခြှဲမလုပျတတျဘူး အမြားအမွငျမှာ လှမနဘေူး အသားမဲခငျြမဲမယျ မကျြကှငျးတှညေိုမယျကမြယျ သူ့မှာအဆငျးမလှခဲ့ဘူး ဒါကြှနျနျော့အတှကျအရေးမှမကွီးတာ…သူ့လို တာဝနျကနြေိုငျမယျ့ သူ့လိုပေးဆပျနိုငျမယျ့ သူ့လိုပါရမီဖွညျ့နိုငျမယျ့ အမြိူးသမီး ကြှနျတျော့အတှကျတော့ လောကမှာမရှိသေးဘူး….ခငျဗြာတို့သူ့ကိုဘယျလောကျဆဲဆဲ ဘယျလိုပွောပွော ဘယျလိုဝဖေနျဝဖေနျ…ကြှနျတျော့အတှကျကတော့ သူဟာ ….ပါရမီဖွညျ့ဖကျ…..သူပါပဲ…..”ဆိုပွီး ရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။
Source and Photo Credit:မောငျခဈြစု And Art Of life
ဘုန်းလျှံရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းလေးမှာ တရားရုံးတတ် မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ ဘုန်းလျှံတို့ချစ်သူနှစ်ဦး